Mukupedzisira, haasati ari makore muhupenyu hwako ayo anokosha. Ndihwo hupenyu mumakore ako. - Abraham Lincoln - Anodzokorora Pedia
Tinoverenga makore edu nemakore, handizvo here? Wakambofunga here kana iyo iri chaiyo nzira yekuverenga kuti wakagara kwenguva yakareba sei? Pakupera kwezuva, hazvimbove nezvemakore ehupenyu hwako anoverengeka! Zvese zviri zveupenyu mumakore ako.
Patinopemberera mazuva edu ekuzvarwa, tinowanzo kuvhenekera kenduru pazera rezera redu, asi tinowanzo kukanganwa kuti hazvisi zera kana nhamba yemakore awakararama.
Kurarama hupenyu hwako hakuna kumboenderana nezera, asi zvinogara zviri izvo zvawakaita kuti hupenyu ihwohwo hukoshe? Haasi makore ehupenyu anofanirwa kukunetsa zvakadaro!
Pakave nevanhu vazhinji vakararama makore mazhinji zvakadaro vakatadza kuita chero chinhu chakakodzera pfungwa. Kune rimwe divi, kune vanhu vashoma vakafa vachiri vadiki kwazvo, asi isu tichiri kuvarangarira nekuda kwechimwe chinhu chavakaitira vamwe.
Nekudaro, murume anoyeukwa kwete nehuwandu hwemakore aanorarama, asi nezviito zvake.
Panzvimbo pekuve nehupenyu hwakareba paunenge usati waita chero chinhu chine musoro, zvakakosha kuti uite chimwe chinhu chine musoro makore aunorarama.
Kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti vanhu vanokuyeuka kunyangwe iwe usipo, edza kuita chimwe chinhu chinoita kuti vanzwe kudada newe.
Rekera hupenyu mumakore ako, pane kungoverenga makore iwe mupenyu!
Akakurumbira Hupenyu Quotes
Akakurumbira Quotes NaVanozivikanwa Vanhu
Kukurudzira Hupenyu Quotes
Hupenyu Upfupi Quotes
Hupenyu Quotes Pfupi
Hupenyu Taura Uye Quotes
Hupenyu Kugadziridza Quotes
Inosimudzira Hupenyu Quotes
Yakajeka Hupenyu Quotes
Iwe Unongorarama chete kamwe Quotes
Hapana chaunosiya mangwana chingaitwe nhasi. - Abraham Lincoln
Iwe haufanire kuchengeta chero chinhu chakamirira mangwana. Hapana akaona kuti zvaizovei mangwana. Saka,…
Ini ndinofamba zvishoma nezvishoma, asi ini handimbofamba netsoka. - Abraham Lincoln
Zvinonzi, "Zvishoma uye zvakadzikama zvinokunda mujaho." Hongu, ichokwadi chaizvo. Haufanire kumhanya…
Ndipe maawa matanhatu kuti nditeme muti uye ndichapedza mana ekutanga kurodza demo. - Abraham Lincoln
Yako nhanho yekugadzirira inosarudza kubudirira kwako. Hongu, ichokwadi! Hardwork ndeyechokwadi yekubhadhara iwe kumashure. You…
Ini handina kusungwa kuti ndikunde, ndinosungirwa kuve chokwadi. Ini handina kusungwa kuti ndibudirire, asi ndinosungirwa kurarama zvinoenderana nechiedza chandiinacho. - Abraham Lincoln
Hupenyu bundle yenyaya dzebudiriro dzakasanganiswa nezviitiko zvinoverengeka zvekutadza. Zvakanaka kurasikirwa zvakare…
Kuranga kuri kusarudza pakati pezvaunoda izvozvi neizvo zvaunoda zvakanyanya. - Abraham Lincoln
Kuranga kuri kusarudza pakati pezvaunoda izvozvi neizvo zvaunoda zvakanyanya. - Abraham Lincoln Akabatana Zvinyorwa: